Angovo biofuel, inona izany ary inona no tombony? | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | | Biofuel, Biomassa
Mba hialana amin'ny fampiasana solika fôsily izay mitombo ny fiakaran'ny hafanan'ny tany noho ny ny famoahana entona entona, isan'andro dia hadihadiana bebe kokoa ary misy karazana angovo hafa soloina toy ny angovo azo havaozina fantatsika.
Ao anatin'ireo angovo azo havaozina dia misy karazany maro: masoandro, rivotra, geothermal, hydraulic, biomass, sns. Angovo biofuel Izy io dia karazana angovo azo havaozina izay azo amin'ny alàlan'ny zavatra biolojika ary afaka manolo ireo solika fôsily. Te hahafantatra bebe kokoa momba ny angovo biofuel ianao?
1 Ny niandohana sy ny tantaran'ny angovo biofuel
2 Biofuel ho angovo azo havaozina
3 Ethanol amin'ny maha biofuel azy
5 Tombontsoa amin'ny fampiasana angovo biofuel
6 Tombony amin'ny fampiasana angovo biofuel
Ny niandohana sy ny tantaran'ny angovo biofuel
ny biofuels Tsy vaovao araka ny inoana azy ireo izy ireo, saingy teraka saiky nifanitsy tamin'ny lasantsy fosily sy motera fandoroana.
Maherin'ny 100 taona lasa izay, Rudolf Diesel dia namorona motera prototype izay nampiasa menaka voanjo na voanjo izay lasa solika diesel taty aoriana, saingy satria mora kokoa ny solika ary mora vidy kokoa dia nanomboka nampiasaina ity solika fôsily ity.
Tamin'ny taona 1908 Henry Ford tamin'ny maodely T azy dia nampiasa ny etanol tamin'ny niandohany. Tetikasa mahaliana iray hafa amin'izao fotoana izao ny orinasan-tsolika Standard tamin'ny vanim-potoana 1920 ka hatramin'ny 1924 dia nivarotra lasantsy tamin'ny 25% an'ny étanol, Saingy ny vidin'ny katsaka izay lafo dia nahatonga an'io vokatra io tsy ho voavaha ara-toekarena.
Tamin'ny taona 30, nanandrana namelona ny famokarana biofuel i Ford sy ny hafa ka nanangana a zavamaniry biofuel any Kansas izay namokatra etanol 38.000 litatra isan'andro miankina amin'ny fampiasana katsaka ho akora. Amin'izao fotoana izao, toby serivisy maherin'ny 2000 izay nivarotra ity vokatra ity.
Tamin'ny taona 40 dia voatery nikatona ity orinasa ity satria tsy afaka nifaninana tamin'ny vidin'ny menaka.
Tamin'ny taona 70 vokatry ny krizy solika Manomboka mampifangaro lasantsy sy etanol indray i Etazonia, ary manome fisondrotana manan-danja amin'ny biofuel izay tsy nitsahatra nitombo hatramin'ny taona lasa ka hatramin'izao eto amin'ity firenena ity fa koa any Eropa.
Mandra-pahatongan'ny tapaky ny taona 80, ny olona dia niasa sy nanandrana ny biofuel voalohany sy faharoa voly sakafo, saingy nisy sehatra samihafa nipoitra izay nampitandrina ny amin'ny loza ateraky ny fampiasana sakafo hanaovana lasantsy.
Manoloana an'io toe-javatra io dia nanomboka nitady akora hafa hafa tsy misy fiatraikany izy ireo fiarovana ara-tsakafo toy ny ahidrano sy legioma hafa izay tsy azo hanina, ka manome biofuel an'ny taranaka fahatelo.
Ny biofuel dia ho mpiorina amin'ny taonjato faha-XNUMX satria ekolojika kokoa izy ireo noho ny fôsily.
Biofuel ho angovo azo havaozina
Hatramin'ny revolisiona indostrialy, ny olombelona dia nanohana sy nampiroborobo ny siansa sy ny teknolojia tamin'ny angovo avy amin'ny solika fôsily. Ireo dia menaka, arina ary gazy voajanahary. Na eo aza ny fahombiazan'ireo angovo ireo sy ny heriny mahery, ireo solika ireo dia voafetra ary lany tamingana haingana. Ho fanampin'izany, ny fampiasana ireo solika ireo dia miteraka famoahana entona entona ao amin'ny habakabaka izay mitazona hafanana bebe kokoa ao aminy ary mandray anjara amin'ny fiakaran'ny maripana sy ny fiovan'ny toetr'andro.
Noho ireo antony ireo dia ezahina ny hitady angovo hafa izay manampy amin'ny fanalefahana ireo olana mifandraika amin'ny fampiasana solika fôsily. Amin'ity tranga ity, ny biofuel dia heverina ho karazana angovo azo havaozina, satria izy ireo dia novokarina avy amin'ny biomass ny zavamaniry. Ny biomasim-pambolena, tsy toy ny menaka, dia tsy maharitra an-tapitrisany taona vao vita, fa amin'ny ambaratonga voafehin'ny olombelona. Ny biofuel dia matetika vokarina avy amin'ny voly izay azo ambolena indray.
Anisan'ireo biofuel misy antsika etanol sy biodiesel.
Ethanol amin'ny maha biofuel azy
Ethanol io no biofuel malaza eto an-tany. Vokatra avy amin'ny katsaka izy io. Ny étanol dia matetika afangaro amin'ny lasantsy mba hamoronana solika mahomby sy madio kokoa hampiasaina amin'ny fiara. Ny antsasaky ny lasantsy rehetra ao Etazonia dia E-10, fifangaroan'ny etanol 10 isan-jato ary lasantsy 90 isan-jato. E-85 dia etanol 85 isan-jato ary lasantsy 15 isan-jato ary ampiasaina hampandehanana ireo fiara mpitondra solika.
Satria novokarina tamin'ny katsaka, azontsika atao ny milaza fa azo havaozina izy io, satria havaozina ny voly katsaka. Manampy amin'ny fanaovana azy io ho loharano tsy mitongilana toy ny solika na arina. Manana tombony ihany koa izy satria manampy amin'ny famoahana entona entona, satria mandritra ny famokarana katsaka, photosynthesis no mitranga ary mandray CO2 avy amin'ny atmosfera izy ireo.
Biodiesel dia karazana biofuel iray hafa izay novokarina avy tamin'ny menaka legioma vaovao na ampiasaina ary tavy biby sasany. Biodiesel dia nalaza be ary niely eran'izao tontolo izao noho ny zava-misy olona maro no nanomboka nanao lasantsy ho azy tao an-trano hialana amin'ny fandaniana be loatra amin'ny famenoana solika ny fiaranao.
Ny biodiesel dia azo ampiasaina amin'ny fiara mandeha amin'ny gazoala maro nefa tsy misy fanovana maotera. Na izany aza, ny motera diesel modely taloha dia mety mitaky fanarenana alohan'ny hahafahany miatrika biodiesel. Tao anatin'izay taona lasa izay dia nisy indostria biodiesel kely nitombo tao Etazonia ary efa misy ny biodiesel any amin'ny tobin'ny serivisy sasany.
Tombontsoa amin'ny fampiasana angovo biofuel
Betsaka ny tombony azontsika amin'ny fampiasana angovo biofuel. Anisan'ireo tombony ananantsika:
Izy io dia karazana angovo azo havaozina ary vokarina eo an-toerana. Manampy amin'ny vidin'ny fitaterana sy ny fitehirizana izany, ankoatry ny fampihenana ny entona entona mankany amin'ny habakabaka.
Manampy antsika hampihena ny fiankinan'ny olombelona amin'ny menaka na karazana solika fosil io.
Ho an'ireo firenena tsy mamokatra solika dia manampy ny toekarena ny fisian'ny solika solika satria any amin'ny toerana toa an'io dia miakatra ihany ny vidin'ny solika.
Ny étanol, izay oxygenate amin'ny lasantsy, dia manatsara ny taha oktane, izay manampy amin'ny fandotoana ny tanànantsika sy mampihena ny etona entona.
Ethanol manana isa octane 113 ary mandoro tsara kokoa amin'ny famatrarana avo noho ny lasantsy. Manome hery bebe kokoa amin'ireo motera izany.
Ny Ethanol dia miasa ho toy ny antifreeze amin'ny motera, manatsara ny fiandohan'ny motera mangatsiaka ary misoroka ny hatsiaka.
Amin'ny alàlan'ny loharanom-pambolena, mitombo ny sandan'ny vokatra, fampitomboana ny fidiram-bolan'ny mponina any ambanivohitra.
Tombony amin'ny fampiasana angovo biofuel
Na dia miharihary sy tsara aza ny tombony, ny fampiasana angovo biofuel dia misy fatiantoka ihany koa toy ny:
Ethanol mandoro 25% ka hatramin'ny 30% haingana kokoa noho ny lasantsy. Izany dia mahatonga azy hanana vidiny ambany.
Any amin'ny firenena maro, ny biofuel dia avy amin'ny fary. Vantany vao nangonina ny vokatra, dorana ny tehina. Izany dia miteraka famoahana methane sy nitrous oxide, izay mampitombo ny fiakaran'ny maripanan'ny tany, satria entona entona roa izy ireo noho ny heriny hitazonana ny hafanana. Noho izany, izay tahirintsika amin'ny emissions amin'ny lafiny iray dia avoakantsika amin'ny lafiny iray.
Rehefa ny etanol dia vokarina avy amin'ny katsaka, entona voajanahary na arina ampiasaina hamokarana etona mandritra ny famokarana azy. Inona koa, Ny zezika azota sy ny herisetra dia raraka amin'ny fizotran'ny katsaka izay mandoto ny rano sy ny tany. Azo vahana izany amin'ny alàlan'ny rafitra famokarana biolojika voajanahary na farafaharatsiny. CO2 avy amin'ny distilleries dia azo ampiasaina hamokarana ahidrano (izay azo ampiasaina hamokarana biofuel). Ho fanampin'izay, raha misy toeram-piompiana eo akaiky eo, ny metana avy amin'ny zezika dia azo ampiasaina hamokarana etona (raha ny tena izy dia mitovy amin'ny fampiasana biogas hamokarana biofuel).
Araka ny hitanao, ny angovo biofuel mandroso amin'ny lalany ho lasa angovo azo havaozina iray hafa izy. Na izany aza, be dia be ny fanatsarana sy ny fampandrosoana ilaina ho lasa loharanon-kery vaovao ho an'ny fiara manerantany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Biomassa » Angovo biofuel
Inona ny biotope?